प्रोस्टाटाइटिस को लागी प्राकृतिक उपचार
समय: 2019-08-13 दृश्य:
प्राकृतिक उपचारहरू प्रोस्टेट स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि उत्तम तरिकाहरू हुन्. एक स्वस्थ आहार खानको साथै व्यायाम, तपाईं पूरक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
पूरक पोषणमा पाइने खाली ठाउँहरू पार गर्न र तपाईंको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन उत्तम तरिका हो.
तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पूरक प्रोस्टाटाइटिस को लक्षणहरु लाई कम गर्न र समग्र प्रोस्टेट स्वास्थ्य राख्न मद्दत पुर्‍याउन. प्रोस्टाटाइटिसका लागि यहाँ केही उत्तम सामग्रीहरू छन्.
पर्स्लेनको औषधीय प्रयोग कम्तिमा पछाडि फर्किन्छ 2,000 वर्ष, तर यो अवधि भन्दा पहिले यो खानाको रूपमा राम्रोसँग प्रयोग गरियो. पर्स्लेनका लागि परम्परागत औषधीय प्रयोगहरू व्यापक छन्। पुरातन रोमीहरूले पेचुरी उपचारको लागि बगैंचा प्रयोग गर्थे, आन्द्रा कीडे, टाउको दुखाइ, र पेट दर्द
यो को एक उच्च सामग्री छ भिटामिन सी. यस बोटको सब भन्दा पुरस्कृत विशेषता ओमेगा in मा यसको उच्च सामग्री हो, हाम्रा शरीरहरू राम्रोसँग काम गर्न आवश्यक फ्याट एसिडहरू मध्ये एक हो. विशिष्टमा, पर्स्लेनमा अल्फा-लिनोलेनिक एसिडको राम्रो मात्रा हुन्छ जसले कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्दछ, रक्तचाप र चयापचय नियमन र मूत्राशयबाट रक्षा, छाती, फोक्सो र प्रोस्टाटाइटिस र मेलानोमास।
अध्ययनले देखाए कि धेरै पुरुषहरूको लागि मात्र प्रोस्टेटाइटिसको एन्टिबायोटिक उपचार पर्याप्त छैन.
Purslane एन्टिबायोटिक उपचारको कारण तपाईंको पेटको microflora मा स्वस्थ ब्याक्टेरियाको गुमाउन सक्छ. यसले ब्याक्टेरियाको संक्रमण पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्दछ.
ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसको उपचारका लागि पर्सेनका फाइदाहरू मानव क्लिनिकल अनुसन्धानमा प्रदर्शन गरिएको छ.
एक अध्ययन क्रोनिक ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसको उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको साथ प्रोबियोटिकसँग पूरकको प्रभावहरू हेर्नुभयो.
पर्स्लेनले हानिकारक प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूबाट बचाउन सक्छ र एन्टिबायोटिक उपचारमा हराएको स्वस्थ-समर्थन ब्याक्टेरियाको घाटा पुनर्स्थापना गर्न सक्दछ. यसले प्रोबियोटिक्सलाई ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसको उत्तम उपचारहरू बनाउँदछ.
हामी औषधि बनाउन गार्डेनिया फलफूल प्रयोग गर्दछौं. गार्डेनियामा शक्तिशाली भड़काऊ गुणहरू छन् र प्रोस्टाटाइटिसको सम्भावित उपचारको रूपमा सुझाव दिइन्छ. यो एक antioxidant को रूप मा पनि प्रयोग भएको छ, सूजन कम गर्न, र प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार गर्न.
गार्डेनियामा फेला परेका केमिकलहरूले इन्सुलिन प्रतिरोध घटाउन सक्छ र ग्लुकोज असहिष्णुता रोक्न मद्दत गर्दछ. गार्डेनिया निकासीले सुन्निलाई कम गर्न सक्छ, कम रगत फ्याट र कोलेस्ट्रॉल, कलेजो रक्षा गर्नुहोस्, र भाइरल संक्रमणको उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउनुहोस्.
हनीसकल एक बोट हो जसलाई कहिलेकाँही "वुडबिन" पनि भनिन्छ।” फुल, बीज, र पातहरू औषधीको लागि प्रयोग गरिन्छ।
हनीसकल पाचन विकारहरु dincluding दुखाई र सूजन को लागी प्रयोग गरीन्छ(सूजन) सानो आन्द्रा को (ईन्टरिटिस) र पेचिश; चिसो सहितको माथिल्लो श्वास नलिका संक्रमण,इन्फ्लूएन्जा, स्वाइन फ्लू, र निमोनिया; अन्य भाइरल र ब्याक्टेरिया संक्रमण; दिमागको सूजन(एन्सेफलाइटिस); ज्वरो; फोडा; र घाउहरू. हनीसकल पनि मूत्र विकारहरूका लागि प्रयोग गरीन्छ. जब Honeysuckle प्रोस्टेट को सूजन कम, सबैभन्दा स्पष्ट प्रभावहरू मूत्र प्रवाहको गति र रातमा पेशाब गर्न कम आवश्यकता सुधार गरिएको छ. यी पनि हुन्2प्रोस्टाटाइटिस को सबै भन्दा सामान्य लक्षण को.
पुरानो गैर-ब्याक्टेरिया प्रोस्टाटाइटिसको उपचार गर्न मद्दत गर्ने अर्को पूरक डान्डेलियन हो। डान्डेलियनमा रसायनहरू हुन्छन् जसले मूत्र उत्पादन बढाउन र सूजन घटाउन सक्छ (सूजन).अनुसन्धानले डन्डेलियनले सामान्य प्रोस्टेट सेल उत्पादन र आकार बढावा दिन मद्दत पुर्‍याउँछ.
5) मकै सिल्क
मकैको कानको माथिपट्टि लामो चम्किलो फाइबरलाई मक सिल्क भनिन्छ. मकैको रेशम औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ.
मकै रेशम मूत्राशय संक्रमणको लागि प्रयोग गरिन्छ, मूत्र प्रणाली को जलन, प्रोस्टेट को सूजन, मृगौला ढु stones्गा, र bedwetting। यो कन्जेस्टिभ मुटुको असफलताको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप,थकान, र उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तरहरू.
मकैको रेशममा प्रोटीन हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिज, र फाइबर. यसले रसायन पनि समावेश गर्दछ जुन पानीको गोली जस्तै काम गर्दछ (मूत्रवर्धक), र यसले रगतमा चिनीको स्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ, र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ.
यद्यपि प्रोस्टाटाइटिस जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था होईन, यसले तपाईंको जीवनको गुणस्तर र प्रोस्टेट स्वास्थ्यमा कमजोर बनाउने असर गर्दछ. धेरै प्राकृतिक सामग्रीहरूले प्रोस्टाटाइटिसको उपचार गर्न सक्दछन्.
Purslane को एक संयोजन, गार्डेनिया, Honeysuckle , dandelion, मकै रेशम र अन्य9परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा पीडा कम गर्न क्लिनिक रूपमा प्रभावकारी देखाइएको छ र प्रोस्टेटाइटिस को कुनै पनि रूप बाट पीडित पुरुषहरु द्वारा प्रयोग गर्नु पर्छ.
अघिल्लोके पर्स्लेनले प्रोस्टाटाइटिसलाई मद्दत गर्दछ??
अर्कोके पुरुषको बुढेसकाल को संकेत गर्छ?